ကူညီကြပါဗျာ- | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကူညီကြပါဗျာ-
Posted by phone_kyaw on Jan 9, 2012 in Copy/Paste | 16 comments
ဒီနှစ်အတွက် လုပ်ချင်တာတွေ ကျနော့်ခေါင်းထဲမှာ တန်းစီနေတယ်။ အဲဒိအထဲက တစ်ခုလောက်ကို ရင်ဖွင့်ချင်တယ်ဗျာ။ ကျနော်သြော်စတျေးလျနိုင်ငံမှာ နေရတာ အတော်လေးကို ငြီးငွေ့ နေပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲမှာ ပြန်ပြီးနေချင်တယ်။ ခလေးတွေကိုလည်း ဗမာစကားကောင်းကောင်းပေးတက်စေချင်တယ်။ အခုပုံစံက သူတို့ ပြောတဲ့ ဗမာစကားကို ကျနော်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေပြီ။ ပြောတော့ ပြောတက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပီဘူး။ ဘိုသံပေါက်နေပြီ။ အခုမှ ခလေးက အသက်က ၇-နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။ ကြီးလာရင် ဒိထက်ပိုပြီးဆိုးသွားနိုင်တယ်။ သူတို့ တောင် ဗမာစကားကို မတက်ဘူးဆိုရင် သူတို့ မွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေဆိုရင် တစ်လုံးမှကို နားလည်မဲ့ပုံမပေါက်တော့ဘူး။ ဒါက ခလေးတွေအတွက်ကို စဉ်းစားမိတဲ့အရာပါ။ သြစီမှာ အလုပ်သွား။ အလုပ်ပြန်။ နေ့ တဓူဝ စားလိုက်သောက်လိုက်နဲ့ ပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတဲ့ဘဝတွေကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်။ ဗမာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ဗမာအစားအစာစတဲ့ ဗမာအငွေ့အသက် မရှိတဲ့ သြစတျေးလျနိုင်ငံကနေ လွတ်အောင်ဆိုပြီး ဒီလိုတွေးနေမိတာပါ။ ဗမာပြည်မှာ မိသားစုကို ထားပြီး၊ ကျနော်က ဗမာပြည်ကနေ သြစီမှာ အလုပ်လုပ်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဗမာပြည်ကိုပြန်။ သြစီမှာ ရှစ်ရက်အလုပ်လုပ်။ ၆-ရက်ကဗမာပြည်မှာနေပေါ့။ လေယျာဉ်ခကတော့ အနည်းအကျဉ်းကုန်ပါလိ့မ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ခက်တာက ကျနော်တို့ က သြစီနိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့ ဗမာပြည်မှာ နေလို့ ရပါ့မလားမသိဘူး။ ခလေးတွေကော ဗမာကျောင်းတက်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား။ အဓိက ဗီဇာ ကိစ္စ ကို သိတဲ့သူများ ပြောပေးကြပါဗျာ။ ဒီရွာထဲက သိတဲ့တက်တဲ့သူများ အကြံညာဏ်ပေးကြစေချင်တယ်။
Phone Kyaw has written 157 post in this Website..
View all posts by phone_kyaw →
ပြည်တော်ပြန်ခွင့် ပြုထားတာနဲ့ ကော မသတ်ဆိုင်ဘူးလားဟင်.
အော်စီနဲ့မြန်မာ တစ်ပတ်တစ်ခါ ခရီးကတော့ ဖြစ်ပါ့မလားဗျ
တောင်တန်း က မောင်ဆန်း says:
ဒါမျိုးကတော့ မောင်ဆန်း ကျွမ်းကျင်တဲ့ အပိုင်းနဲ့ မဆိုင်
ကျွန်တော်တို့လည်း တတ်နိုင်သမျှ စုံစမ်းပေးပါ့မယ်။
မြန်မာပြည်က ကြိုဆိုနေပါမယ်။ ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်လာခဲ့ပါ။
““ခလေးတွေကိုလည်း ဗမာစကားကောင်းကောင်းပေးတက်စေချင်တယ်။ အခုပုံစံက သူတို့ ပြောတဲ့ ဗမာစကားကို ကျနော်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေပြီ။ ပြောတော့ ပြောတက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မပီဘူး။ ဘိုသံပေါက်နေပြီ။””
ဗမာစကားကို တက်အောင်လား၊ဒါမှမဟုတ်ရင် တတ်အောင်လား။ကူညီနိုင်ပါတယ်။အများနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့
နေ့ ခင်များကို ကူညီနိုင်သလောက် ကူညီပေးပေါ့မယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းကနိုင်ငံခြား သွားနေတဲ့ခလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်းဒီလိုအခက်အခဲမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနှစ်တခါပြန်လာရင် မြန်မာစာဆရာမခေါ်သင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းသိပ်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
( ယုံတဲ့သူကလည်းယုံတာဘဲ )
ုငါးနှစ် လောက် နေ ရာလဲ မ လေ။
… နိုင်ငံခြားသားခံထားရင် မြန်မာပြည်ထဲအပြီးပြန်နေလို့မရပါဘူး..
ဗီဇာသက်တမ်းတိုးနေလို့ရပါတယ်… ၂နှစ်လောက်ထိ အပြင်ပြန်မထွက်ပဲ..
၁လ..၃လ..၆လ.. ၁နှစ်.. စသဖြင့်တိုးပြီးနေလို့ရတယ်လို့ထင်တာပဲ..။
အဲဒီလိုတိုးတာ.. ဗီဇာစရိတ်လည်း သိပ်မကုန်ဘူးကြားတယ်..။
ကလေးတွေက.. ၃လလောက်မြန်မာပြည်ထဲနေလိုက်တာနဲ့.. မြန်မာစကား ပီပီသသပြောတတ်သွားလိမ့်မယ်..။
လွှတ်တော်ထဲ.. ဒူဝယ်စစ်ဒဇင်ကိစ္စ တိုက်တွန်းကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်..။
မရလည်း.. မြန်မာနိုင်ငံသားပြန်ခံတဲ့ကိစ္စ.. လုပ်နိုင်ဖို့..လ၀က ဥပဒေတချို့လုပ်ခိုင်းဖို့တိုက်တွန်းသင့်တယ်..ထင်တာပဲ..။
အကောင်းဆုံးကတော့ ဩစီမှာရှိတဲ့ မြန်မာသံရုံးမှာ အရင်စုံစမ်းသင့်ပါတယ်၊ကိုခိုင်ပြောသလိုပါပဲ နိုင်ငံသားခံထားပီးရင်တော့ ဗီဇာနဲ့ပဲနေလို့ရမှာပါ သားသမီးတွေကို ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ ဗာစကားပြောနဲ့ဗမာစာ သင်ပေးလို့ရနိုင်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်…စင်္ကာပူမှာရှိတဲ့ကျနော့်မိတ်ဆွရဲ့ သားသမီးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ မိဘကလည်းအချိန်နည်းနည်းပေးနိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်…
တပတ်တစ်ခါ မြန်မာပြည်ပြန်မယ့်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်လေးနဲ့ဆိုရင်ပိုပြီးအစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်….
တော်ရုံကြွားပါကိုဘုန်းကျော်ရယ်။ အရာရာသိပြီးအမြဲဆရာကြီးလုပ်နေတဲ့သူကဗီဇာကိတ်စမသိဘူးဆို တာဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ တပတ်တကြိမ်မြန်မာပြည်ပြန်တာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အလွယ်တကူသိနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဒီစာရေး တာရိုးသားမှု့ရှိပါရဲ့လား။ အရင်စာမှာကော်မင့်မရတာနဲ့ကော်မင့်လိုချင်လို့ရေးတာလား။ ရှင်ရေးထားတာတွေကနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးမသိဘူးဆိုတာယုံရခက်ခက်ပါ။
တိုင်းတပါးမှာလည်း နေရတာဖြစ်ပြန်၊ အလုပ်ခွင်ထဲမှာလည်း နိုင်ငံခြားသားအများစုနဲ့ သာလုပ်ကိုင်နေရတာကြောင့် မြန်မာ့အစားအစာ၊ စကား၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို တမ်းတတာတော့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ကိုဘုန်းကျော်ပြောတာတွေက နည်းနည်းမြင့်သလိုဘဲ(ဘဝင်)..(Thel Nu Aye ပြောသလို ကျုပ်တောင်သံသယဖြစ်ချင်ချင်) ထားပါတော့ ဒါကတပိုင်း..
ဖြစ်ချင်တာကတော့လူတိုင်းပေါ့ဗျာ နိုင်ငံအတွင်းနေနေသူလည်း နိုင်ငံခြားကိုနေ့ ချင်းပြန်ရှော့ပင်ထွက်ချင်တာမျိုး၊ ကမ္ဘာတလွှား သွားလာချင်တာမျိုး၊ သူသူကိုယ်ကိုယ် ဟိုဟာစားချင် ဒီဟာစားချင် ဟိုဟာလုပ်ချင် ဒီဟာလုပ်ချင် ဟိုဟာဖြစ်ချင် ဒီဟာဖြစ်ချင်ကြတာချည်းဘဲ.. ဆန္ဒ နဲ့လက်တွေ့ အမြဲတမ်းတထပ်ထည်းမကျတာတော့ လောကသဘာဝဘဲ.. ဒါကို သိရဲ့ သားနဲ့(မဖြစ်နိုင်မှန်းလည်းသိရဲ့ သားနဲ့ )တဒင်္ဂပြင်းပြစွာခံစားမှုတစ်ခုကို လူပုံအလယ် ပြောပြတာတော့ နည်းနည်း ခလေးဆန်တယ်လို့ပြောချင်တယ်.. ဒါကတစ်ကြောင်း..
ကိုဘုန်းကျော်ရေ.. လူတိုင်းလူတိုင်း ခံစားမှုတစ်ခု ပြင်းပြင်းပြပြဖြစ်ပေါ်လာရင် နီးစပ်ရာ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း သို့ မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ယောက်ယောက်ကို ဖွင့်ပြောတိုင်ပင်လိုက်ရင် စိတ်ပေါ့သွားတယ်မဟုတ်လား.. အခုလည်း ခင်ဗျားအနေနဲ့ လက်ရှိခံစားချက်ကို ရွာထဲမှာ တင်ပြတယ်ဆိုတာလည်း ခင်ဗျားအနေနဲ့ရွာအပေါ်သံယောဇဉ်ရှိလို့ ဘဲလို့ ကျုပ်ထင်တယ်.. ဒီတော့ကာ ခင်ဗျားအနေနဲ့ရွာသူားတွေ မျက်မုန်းကျိုးစေမယ့် ပို့ စ်မျိုးတွေရှောင်ပါလို့ ထပ်မံအကြံပေးပါရစေ.. အခုခင်ဗျား ဖြစ်စေချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့ သြော်စီမှာ မြန်မာအများစုနေတဲ့နေရာကို မိသားစုရွှေ့ လိုက်လေ.. ခင်ဗျားကတော့ အလုပ်ထဲမှာ၊အလုပ်အနားမှာနေပေါ့၊ တပတ်တခါလောက်တော့ မိသားစုနဲ့ တွေ့ (အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ ခင်ဗျားခလေး အဖေမေတ္တာအပြည့်မရမှာဘဲ). လခကောင်းကောင်းရတဲ့အခုအလုပ်ကနေ ခင်ဗျားမထွက်ဘူးဆိုတာတော့ ကျုပ်ကြိုတွေးပြီးသား
နောက်တနည်းက ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်ပြီး သွားလိုက် လာလိုက်လုပ်လို့ ရပါတယ်.. မိသားစု အပါအဝင်ပေ့ါ.. ခင်ဗျားဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ တစ်ထပ်တည်းတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး.. တော်တော်ခက်မှာ.. မိသားစုကို အောက်လမ်းကနေ မြန်မာပြည်တော့ ပြန်မပို့ လေနဲ့ .. ဒုက္ခတွေတပွေ့ တပိုက်ရသွားမယ်.. ပြောသာပြောရတယ် ခင်ဗျားရဲ့ ဆန္ဒကတော့ တကယ့်အမှန်ဟုတ်ရဲ့ လားလို့ ပြန်စမ်းစစ်ဦး.. ငှက်က ရေကူးချင်တယ်၊ ငါးက ပျံသန်းချင်တယ်ဆိုတဲ့ အနေမျိုးတော့ မတွေးလေနဲ့ …
ဒီအစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ပတ်စပို့ ပြန်လျှောက်ရင် ဒဏ်ကြေးဆောင်ပြီး ပြန်ပေးမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။
ကိုဘုန်းကျော် ဆန္ဒကတော့ ဟုတ်ပါပြီ
ကလေးတွေ ဆန္ဒရော ထည့်မတွက်ဘူးလား။
ပြန်လာရင်ရော ပျော်ပါ့မလား.. ??
သူတို့နောင်ရေးရော သြဇီမှာထက် ပိုကောင်းပါ့မလား..??
ကြွားတာမဟုတ်ဘူးဗျ။ တကယ်ပြောနေတာ။ သြစီမိုင်းမှာ မလုပ်ဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့ ကြွားတယ်ထင်မှာပေါ့။ ကျနော့်အလုပ်မှာ ဖိလစ်ပိုင်တွေ ရှိတယ်။ သူ့ နိုင်ငံကနေ နှစ်ပတ်တစ်ခါ အလုပ်ဆင်းတယ်။ တချို့ က အင်ဒိုနီးရှားကနေ လာပြီးဆင်းတယ်။ တချို့ က ထိုင်းကနေ လာတယ်။ Tiger Airway and Asia Asia နဲ့ အသွားအပြန်လုပ်တာ ဗမာပြည်အထိ ဒေါ်လာ ၆ဝဝ-လောက်ပဲ ကုန်တယ်။ တစ်လကို ဝင်ငွေ ၅ဝဝဝ-လောက်ရှိတဲ့လူက ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝ လောက် လေယျာဉ်ခအတွက် အကုန်မခံနိုင်ဘူးလား။ လူတိုင်း ခံ နိုင်ပါတယ်။ လေယျာဉ်စီးတဲ့ကြာချိန်ကလည်း အသွားအပြန်မှ အများဆုံး ၂၄-နာ၇ီဗျာ။ဆိုတော့ သြစီမှာနေမဲ့အတူတူ ရန်ကုန်ကနေ အလုပ်ဆင်းရင် ပိုပြီး အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလား။ ထပ်ပြီးမေတ္တာရပ်ခံချင်တာက ကြွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်အခြေအနေအမှန်ကို ရှယ်ပေးတာပါ။ Kai ပြောသလို Dual Citizen ခွင့်ပြုရင် ကျနော်လို လူမျိုးတွေ အများအပြားအတွက် အရမ်းကောင်းမှာပါ။ ထိုင်းနဲ့ ဖိလစ်ပိုင်ကတော့ ခွင့်ပြုပါတယ်။
ပြန်လာချင်တဲ့လူကို ၀ိုင်းမဖဲ့ကြပါနဲ့ဗျာ၊ အပြုသဘောလေးနဲ့ကြိုဆိုကြပါ။
တို့ရှိရာကို… ပြန်လာခဲ့ပါ ..လှိုက်လှဲဆုံးအပြုံးနဲ့ စီးကြိုမယ်………(စိုးလွင်လွင်သီချင်း)
“ကလေးတွေ ဆန္ဒရော ထည့်မတွက်ဘူးလား။
သူတို့နောင်ရေးရော သြဇီမှာထက် ပိုကောင်းပါ့မလား..??”
ကိုဘုန်းကျော်ရေ … ကော့မန်မပေးတော့ဘူး စဉ်းစားထားပေမယ့် … အနှောင့်သွား ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပို့စ်ကို အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ၀င်ရေးသွားပါတယ် ။
မြန်မာနိုင်ငံကို တကယ်ပြန်လာချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် … မဖြစ်ဖြစ် …. ဆက်စပ်တွေးမနေတော့ပဲ .. ရိုးရိုးပဲ စာဖတ်ပြီး သာမန်တွေးရိုးတွေးစဉ်အတိုင်းပဲ တွေးပါတယ် … ။
((ခလေးတွေကော ဗမာကျောင်းတက်လို့ ရနိုင်ပါ့မလား။)) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့
ကလေးတွေကို မြန်မာကျောင်း(အစိုးရကျောင်း)တွေ တက်စေချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာစကားသင်ဖို့ နဲ့ မြန်မာတွေကြား အရောတ၀င်ရှိဖို့ … တစ်ခုတည်း ဆိုလျှင်တော့ မတတ်သင့်ပါဘူးလို့အကြံပြုချင်ပါတယ် ။ ကိုဘုန်းကျော်ကလေးတွေက7နှစ်တောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ …. ဒီမှာ သူငယ်တန်းစတတ်တတ်ချင်းတောင် ငါးနှစ်လေ … ။ အသက်အရွယ်နဲ့ ၊ ပေါက်ဖွားရာ မတူတဲ့ ကလေးတွေကြား … အထူးအဆန်းကလေးတွေလိုဖြစ်နေတာကြောင့် .. ပတ်ဝန်းကျင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး 100%အဆင်ချောမှာ မဟုတ်ပါဘူး … ။
အစိုးရကျောင်းမှာ စာသင်နေတဲ့ ဆရာမတွေကို ပိတ်ရက်မှာ အိမ်ပင့်သင့်ရုံနဲ့ မြန်မာစကားကို တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါတွေတင်မကပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံတွေကိုပါ … ထိုဆရာမကနေ တစေ့တစောင်း သင်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် … ။